Unqatsheliwe u-e.tv uzama ukulaxaza izindaba za-6:30 | isiZulu
Unqatsheliwe u-e.tv uzama ukulaxaza izindaba za-6:30
Kuzuze u-etv ngokulahleka kwenqwaba yababukeli beSABC
Ujoyina iRhythm City usaziwayo ongaconsi phansi kwabaningi
Ababukeli bafuna i-etv ibuyise amafilimu ocansi
Cape Town – Isiteshi sikamabonakude esingakhokhelwa nesenza inzuzo, u-e.tv, sesikhale ngaphansi emzwamweni yaso yokulaxaza ukusakazwa kwezindaba zesiNgisi ngesikhathi esibalulekile (prime time) nalapho iningi lababukeli likhona ukubuka umabonakude.
Lokhu kuza njengoba inhlangano elawula ezokusakaza kuleli, i-Independent Communications Authority of South Africa (Icasa), ichithe isicelo se-e.tv, yaphinde yayalela lesi siteshi ukuthi siqhubeke nokusakaza izindaba ngesikhathi esibalulekile.
OLUNYE UDABA:Kuzuze u-etv ngokulahleka kwenqwaba yababukeli beSABC
Lesi siteshi sikamabonakude besifake isicelo sokuthi kuguqulwe imibandela yemvume yaso yokusakaza sikhala ngokwehla kwesibalo sababukeli bezindaba. Kodwa-ke i-Icasa isichithile lesi sicelo, yathi angeke kuwusize umphakathi ukungadlalwa kwezindaba ngesikhathi esibalulekile.
Ukwehla kwesibalo sababukeli bezindaba zaka-e.tv kungenzeka ukuthi kudalwe yizinqumo ezithathwe yinkampani ephethe lesi siteshi, i-eMedia Investments, njengoba esikhathi esingaphambilini ishintshashintshe kaniningi isikhathi okusakazwa ngaso izindaba kanye nendlela ezethulwa ngayo eminyakeni eyedlule.
Izindaba zesiNgisi ku-e.tv yizona ezazihamba phambi ngokubukelwa eNingizimu Afrika ngaphambi kokuthi lesi siteshi sinqume ukufaka imidlalo yaso efana ne-Scandal kanye neRhythm City ngalesi sikhathi.